निर्मला हत्याकाण्ड थप आशन्का डीएनए परीक्षण प्रहरी प्रयोगशालामा किन ? - Maxon Khabar
Home / News / निर्मला हत्याकाण्ड थप आशन्का डीएनए परीक्षण प्रहरी प्रयोगशालामा किन ?
निर्मला हत्याकाण्ड थप आशन्का डीएनए परीक्षण प्रहरी प्रयोगशालामा किन ?
असोज १५ काठमाडौं
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भन्छन्, प्रमाण लुकाउन प्रहरी नै संलग्न भयो । अनि प्रहरी आरोपीको DNA परीक्षण आफ्नै प्रयोगशालामा गर्छ । यसले आशंका थप बढाएको छ।
एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र अर्का स्थानीय आयुष विष्टको डीएनए नतिजा नेगेटिभ आएको छ । कञ्चनपुरकी १३ बर्से बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठेको हो ।
विकसित मुलुकले सही निर्णयमा पुग्न एकभन्दा बढी मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण गराउँछन् । अधिवक्ता केदार दाहाल निर्मला बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरीको प्रयोगशालाभन्दा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिने उपयुक्त भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभावले पनि डीएनएको गुण कोल्याप्स हुन्छ ।
डीएनए संकलनका प्रक्रियामा चाहिने विशेष खालको बक्स छैन भन्ने सुनेको छु । प्रहरी नै मुछिएको घटनामा प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगले गहिरोसँग परीक्षण गर्न सक्यो–सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’
‘लाहाछाप हानेर ल्याएको हुन्छ । यस्तो पाइयो भनेर ल्याएको हुन्छ । डीएनए फिल्टर गर्ने उपकरण पनि नभएको र जस्तो ल्याएको हुन्छ त्यस्तै परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता हो ।’ डीएनए परीक्षण गर्ने एक वैज्ञानिकको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिवक्ता दाहालले भने ।
संकलनमा त्रुटि हुन पुगेको अवस्थामा गुणस्तर कायम नहुने उनले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, फोरेन्सिक मेडिसिन विभागका उपप्राध्यापक डा. गोपालकुमार चौधरीका अनुसार बलात्कार मुद्दामा तीन तहको भेजाइनल स्वाब निकालिन्छ । केमिकल जाँच, माइक्रोस्कोपिक जाँच र डीएनए विश्लेषण हुन्छ ।
‘अभियुक्तले कण्डम प्रयोग गरेको रहेछ भने डीएनए परिक्षणमा देखिने सम्भावना न्यून हुन्छ’, डा. चौधरीले भने । लिंगबाट आँखाले नेदेखिने कोष योनीमा परेको रहेछ भने पनि पत्ता लाग्न सक्छ । बलात्कारको बेला जोसुकैले पनि बचाउन कोशिश गर्छ ।